MAXKAMAD KU TAALA TURKIGA AYAA XUKUN KU RIDDAY DAD ISKU DAYAY INEY DILAAN MADAXWEYNE ERDUGAN
October, 05-2017 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
Maxkamad ku taalo dalka Turkiga ayaa xukun ku riday 40-Qof oo lagu helay danbi ah iney qorsheynayeen shirqool lagu dili rabay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyib Erdodan intii lagu guda jiray Afganbigii dhicisoobay ee dhacay sanadkii la soo dhaafay.
31-Eedeysanayaal oo ay ku jiraan saraakiil sar sare ayaa midkiiba maxkamada ay ku xukuntay xabsi daa’in,waxaana xukunka uu ka dhacay maxkamad ku taalo magaalada Magula ee dhacda Koonfur Galbeed dalkaasi Turkiga,sida ay qortay Wakaalada Wararka ee sida gaar ah loo leeyahay ee Dogan.
Magaalada Magula ayaa ah magaalo loo tamashleyn tago halkaasi madaxweyne Erdogan iyo qaar ka mid ah qoyskiisa ay si dirqi ah kaga baxsadeen kooxo isa soo abaabulay oo ku weeraray Hotel uu ka deganaa magaaladaasi habeenkii uu socday howlgal lagu doonayay in lagu majaxaabiyo Dowladda uu hogaamiyo bishii July 15, 2016.
Dadka xukunka lagu riday waxaa ka mid ah Gokhan Sahin Sonmezates oo ahaa sarkaal sare hore uga tirsanaa Ciidamada Turkiga kaasoo lagu eedeeyay inuu hogaaminayay Qorshaha shirqool, iyo Taliye hore oo lagu magacaabo Zekeriya Kuzu oo ahaa sarkaal caan ah oo mudo afar maalmood ah ay raadinayeen Ciidamada Turkiga Afganbigii dhicisoobay ka dib.
Badi dadka xukunka lagu riday waxay u badan yihiin saraakiil hore,islamarkaana doonayay iney qaarijiyaan madaxweyne Erdogan inta uu howlgalka Afganbi uu socday ,balse markii danbe laga guuleystay.
Inta uu socday Afganbiga fashilmay ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo isugu jira Shacab difaacayay Dowladdooda,Ciidan iyo walba qaar ka mid ah dadkii soo abaabulay Qorshaha Afganbi.
Dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku martay iney cadaalada horkeeneyso shaqsiyaadkii ka danbeeyay qorshaha lagu doonayay in lagu Afganbiyo Dowladda Dimuqraadiga ee dalkaasi Turkiga.
Madaxweyne Xasan sheekh oo Cambaareeyay weerarkii Hotel saxafi
Madaxweyne Xasan Shikh oo Kulan la Qaatay Guddiga New Deal
Dhageyso: Afhayeenka Madaxweynaha Soomaaliya oo ka warbixiyay waxyaabihii looga hadlay shirka Newyork ee ay shir gudoominayeen Madaxweyne xasan sheekh iyo xogyaha Guud ee Qaramada midoobay Baan kimoon
Madaxweyne Xasan Sheekh oo baaritaan Caafimaad u aaday dalka Jarmalka
Idman Ilahey hakaa dhigo Views: 7832